Sawirro: Kulan Runta la isugu sheegay oo xalay ka dhacay VILLA SOMALIA - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Kulan Runta la isugu sheegay oo xalay ka dhacay VILLA SOMALIA
Sawirro: Kulan Runta la isugu sheegay oo xalay ka dhacay VILLA SOMALIA
Muqdisho (Caasimada Online) Magaalada Muqdisho waxaa habeenkii xaley ka dhacday xaflad loogu duceenayay ra’iisal wasaarihii horre ee Soomaaliya, Cabdirsaaq Xaaji Xuseen oo lagu wado in maanta oo Jimco ah lagu aaso magaalada Muqdisho.
Xafladda oo ka dhacday xarunta Villa Somalia ayaa waxaa ka qaybalay madaxweynaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Ra’iisul Wasaare ku xigeen, Madaxweynaha Puntland, Hoggaamiyaha Jubba, Madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed,Ra’iisul Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi, Madaxweynihii hore ee Puntland, wasiirro, wafdi ka socday Puntland iyo Jubba iyo Madax dhaqameed Soomaaliyeed ayaa loogu duceeyey Ra’iisul Wasaarihii hore ee Cabdirisaaq Xaaji Xuseen.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay siddii looga shaqeyn lahaa midnimada Soomaaliya, isagoonta tusaale u soo qaatay aaska qaran ee marxuum Cabdirisaaq in uu mideeyay madax badan.
“Ra’iisul Wasaarihii hore waxuu ahaa shaqsi u istaagay midnimada Soomaaliyeed oo weli daneynayey inuu dalka wax walba la qabto. Waxaan is dhaafsanay qoraallo uu tallooyinkiisa ku soo jeedinayey. Waxaana ka codsaday inuu dib-u-heshiisiinta dalka horseed ka noqdo, iyadana waa uu iga aqbalay ee ALLAHA u naxariisto” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu Cabdirsaaq kula kulmay dalka Maraykanka sannadkii horre isagoona u sheegay in uu ka qayb qaato shirarka nabadeenta ee Soomaalida loo qabanaayo “Wuu iga aqbalay ayuu yiri ”
Ra’iisal wasaaraha ayaa isna ka codsaday madaxda ka socota Puntland iyo Kismaayo in ay labo maalmood oo kale ay sii joogaan magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirweyne looga hadlaayo midnimada Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna sheegay in Puntland ay u taagan tahay siddii loo soo celin lahaa midnimada Soomaaliya.
Wuxuu ballan qaaday in ay geed dheer iyo mid gaaban ay u fuuli doonaan siddii Soomaalida la isugu keeni lahaa oo looga shaqeyn lahaa minimada Soomaaliya.
Hoggaamiyaha KMG ah ee Jubba ayaa isna ugu baaqay madaxda dowladda Soomaaliya in aysan isku mashquulin arrimaha gobalada isagoona intaas ku daray in qof kasta looga baahan yahay in lagu aaso goobta uu ku dhashay” Mahan in ufurow lala aado” ayuu yiri.
Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa madaxda iyo shacabka ugu baaqay in ay ku daydaan marxuum Cabdirisaaq.